Shiinaha dabka u adkaysta iyo kuleylka u adkaysta muraayadaha tubbada soosaarka iyo warshad | Jujie
tuubbada dabka ee maaddada fiber-glaaska u adkaysta dabka iyo kuleylka u adkaysta
fiber fiber galaas tuubada
Tuubbada Maro adag
Sharaxaadda alaabada ee muraayada xarigga tuubada
Markaad ubaahantahay waxqabad sare Maro adag tuubada tidcan, Ku kalsoonow tayada iyo xirfad-xirfadeedka aan ku soo bandhigno halkan alibaba. Waari kara oo laastik ah. Waxay haysaa heerkul aad u sarreeya oo hooseeya. Ma sameeyo koronto. Halkan Jujie, waxaan uxusnay geeddi-socodka waxsoosaarka si kaamil ah si aan u soo bandhigno wax soo saar tayo leh oo aan hubno inaad ku qanacsan tahay. Waxaan la kulannaa ISO 9001: heerarka 2015. Waxaan bixinaa ikhtiyaarrada wax iibsiga ee joogtada ah iyo sidoo kale xulashooyinka wax iibsiga jumlada.
Gacanta Fiberglass-ka waxaa loo qaybiyaa tuubbo caag ah oo gudaha ah iyo tuubbo lakab laba-gees ah leh, qaabkiisuna waa sidan soo socota.
Xogteeda waa la habeyn karaa.
Sawirrada tuubbada maroogga dhejiska ah
Waxyaalaha laxiriira ee muraayada fidinta tuubada
Hore: Maro adag dahaadhay tubbada kulaylka adkaysi u leh
Xiga: galka tuubada ilaalinta silig koronto
Maro adag dahaadhay tubbada kulaylka adkaysi u leh
dahaarka siligga siligga ah
marooyin silig silikoon rubbe tubbada caag ...
fiber fiber silig silig silig ah
cable silikoon tubbada ningax galaas fiber
Tayo sare leh qalabka dhismaha silicone ...